200ml Amber Glass Pharmaceutical Bottle, Pill ite with Black Aluminium mkpuchi
The 200ml amber iko ọgwụ ite na mkpuchi bụ akụkụ nke anyị na-emepụta ọgwụ usoro nke nkwakọ ngwọta. The ezigbo iko dị mfe ibufe na-aka, mgbe amba iko na-eje ozi dị ka a eke nyo maka ultraviolet ụzarị, otú i nwere ike n'enweghị ihe ọ bụla echekwa photosensitive Chemicals na capsules na a vial. Ihe mkpuchi urea ojii nke 45mm gụnyere nwere nchekwa dị elu. A na-akpụzi eriri ahụ n'olu nke kalama ahụ iji gbochie nkwụsị na nchapu.
100ml amba iko na nkà mmụta ọgwụ sirop karama na tamper doro okpu
Anyị 100ml amba iko sirop karama na tamper-àmà okpu nwere ọdịnala na nkà mmụta ọgwụ na karama udi na ezigbo maka ọtụtụ ọgwụ na chemical ngwọta na syrups. Ọ bụrụ na ịchọrọ mkpuchi mkpuchi aka iji gbochie ụmụaka ịbanye, ị kwesịrị ịtụle iji ya.
1ML Amber Glass Botter with Glass Eye Dropper Dispenser for Sample Vial Small Essential Oil Bottle
Akụkụ-elu 1.3 sentimita asatọ, dayameta 0.6 sentimita asatọ (fanye etinyere).
Ọ dị mfe igosi ndị ahịa ihe nlele, ha bara uru maka ịkwakọghachi ya, yabụ naanị ị ga-enweta ihe ịchọrọ na njem.
Kalama ahụ na-agụnye onye na-atụfu mmiri nke etinyere n'ime okpu karama ahụ maka ịdị mfe, nkesa zuru oke na ịnye ọgwụgwọ ziri ezi nke ọgwụ mmiri, ọgwụ, ahịhịa na aromatherapy mmanụ dị mkpa.
32oz 1000ml iko Mason nchekwa canning ite na ọlaọcha ịghasa metal mkpuchi
Ihe mkpuchi 1000ml 32oz a bụ nnukwu ite, dị mma maka oriri ezinụlọ. A na-eji iko iko dị elu mee iko ọ bụla nke ọma wee rute ọkwa kachasị elu. Ebumnuche ya na-eme ka ịdị mfe nke iji olu dị obosara na ogologo ahụ dịkwuo mma. Ihe nkpuchi 86mm kwekọrọ na ite ma nye gị ọtụtụ elele, gụnyere plastisol ntekwasa ma ọ bụ PE liner. Ihe mkpuchi ahụ nwekwara ọtụtụ agba, gụnyere oji, ọla edo, ọlaọcha na ihe ndị ọzọ. N'agbanyeghị ihe ị chọrọ, ị nwere ike ijide n'aka na ọdịnaya gị dị nchebe, chebe ma gosipụta n'ụzọ ziri ezi.
16oz 500ml obosara n'ọnụ iko Mason ite na acha plastic mkpuchi
16oz 500ml Clear Glass Food ite & Plastic ịghasa mkpuchi bụ a sara mbara, nri-mma ite nke ahụ bụ magburu onwe maka na-ejide a nso nke pickles, sauces na-echebe. Ọdịdị dị gburugburu na-enye nnukwu ihu maka ịgbakwunye aha ma ọ bụ ngwaahịa ngwaahịa ndị ọzọ. Efere a na-abịa na mkpuchi mkpuchi 86mm - nke zuru oke maka ịchekwa nchekwa nke ọdịnaya nke ite gị.
4oz 120ml Hexagonal Clear Glass ite na mkpuchi ọla edo
Nke a bụ iko iko 4oz bụ nnukwu ite jam, nke dabara adaba maka ịre n'ahịa ahịa. Shapedị pụrụ iche dị mfe ijide n'aka ma jiri iko dị elu na-acha odo odo. O zuru oke maka igosipụta na ịchekwa jelii gị arụrụ n'ụlọ, mkpụrụ osisi, oké chutney na mmanụ a honeyụ dị ụtọ.
1.5oz 45ml Mini hexagonal Clear Glass ite maka Honey, Jam, cochọ Mma
Igwe ite hexagonal a dị 45ml nwere mkpuchi bụ akụkụ nke usoro ite anyị hexagonal, ọ bụrụ na ịchọrọ ịnye ngwaahịa na nha dịgasị iche, ị kwesịrị ịtụle nke a. A na-eji karama mpempe akwụkwọ mejupụtara kalama a dị ml iri anọ na ise, nke zuru oke maka igosipụta na ịchekwa jelii gị, mkpụrụ osisi jam, chunky chutney na mmanụ a honeyụ dị ụtọ.
Sprouting ite Kit Mkpụrụ Sprouter Set gụnyere Wide Muth Mason ite, 304 igwe anaghị agba nchara ntupu mkpuchi, Neoprene uwe na Plastic ntapu Tray maka Ime Mkpụrụ pulite
Ngwa a nwere ihe niile ịchọrọ ịmalite. Ọ nwere iko ite nwere ike inyere gị aka ịkụ ọtụtụ ụdị mkpụrụ dị iche iche na-enweghị nsogbu ọ bụla. Ntapu tree. Ugbu a ị naghị etinye ite ahụ n’ebe gbara ọchịchịrị. Anyị na-enye uwe mkpuchi neoprene na-ekpuchi ọkụ nke nwere ike ịme ka ọchịchịrị, yabụ ị nwere ike ijikwa gburugburu ebe enwere ike idowe ite ahụ naanị site na itinye uwe ahụ na ite ahụ. Nke a na-enyere aka ịmị mkpụrụ, belata oge izizi, na-amịpụta akụrụngwa toro ogologo, ma nwee ike ịgbalite pigmenti ihe ọkụkụ, wee si otú ahụ na-enyere mkpụrụ ụfọdụ aka ipu ome.
Clear Glass mgbapụta karama, Glass Ude mmiri iko na mgbapụta, Glass kalama na mgbapụta Dispenser, Iko karama na ịgba nfuli, Glass mgbapụta karama N'ihi mkpa mmanụ, Glass mgbapụta karama N'ihi ncha ntutu,